Izifundo Zolimi Sakusihlwa - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Izifundo zakusihlwa nezimpelasontoFunda uLimi Olusha noma ulungiselele ukuhlolwa okumile
Izifundo zakusihlwa nezimpelasontoUKUKHETHA KWEZINHLELO ZESIQINISO SEZONKE NEZIDINGO
Ukulinganisa umsebenzi, impilo kanye nesikole kungaba inselelo. I-BLI inokuthile okusizayo. Izifundo zethu zakusihlwa zenzelwe ukusiza ukuthuthukisa amakhono akho olimi nokusiza ukufeza izinhloso zakho zemfundo. Umnyango wethu wezezifundo usungule ngokucophelela ikharikhulamu ebanzi ehambisana namahlelo akho matasa.
Sinikeza amakilasi amancane akwenza ukwazi ukunakekelwa ngabanye nokwakha ukuzethemba. Indlela yethu ibuye ishintshwe ukuze kugxile emakhono akho okuxhumana. Ngokuya izinhlelo zethu zakusihlwa, uzothola nethuba lokuhlangana nabantu abavela emiphakathini eminingi yobuchwepheshe, engakusiza ukwandisa inethiwekhi yakho yobuchwepheshe futhi uthuthukise umsebenzi wakho.
Thola amaphuzu aphumelelayo lapho uthatha uhlolo lwe-TEFAQ.
“Uhlelo lwakusihlwa lwe-BLI lube yithuba elihle kimi lokuthuthukisa ikhono lami lolimi lwesiFulentshi. Isimiso esivumelana nezimo singivumela ukuba ngifunde kabili ngesonto ngemva komsebenzi. Amakilasi ayashintshashintsha futhi mancane, lokho kungivumele ukuthi ngithuthukise ikhono lami lolimi notoriusly. Othisha bayamangalisa ngakho-ke awuze udinwe ekilasini ”